Ngaba uhlala ukhe uhlaziye iphepha eliBekekileyo? Intsomi ye-SEO | Martech Zone
Umntu endisebenza naye waqhagamshelana nam owayehambisa isiza esitsha kumthengi wabo kwaye wacela ingcebiso kum. Uye wathi Umcebisi weSEOAbabesebenza kunye nenkampani babacebisa ukuba baqinisekise ukuba amaphepha awayebekwe ngokwabo ukuba awatshintshi kungenjalo banokulahleka kwinqanaba labo.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo bendincedisa ezinye zeempawu ezinkulu zehlabathi ukuba zifuduke, zisebenzise, ​​kwaye zakhe izicwangciso zomxholo ezibandakanya inqanaba lendalo njengejelo lokuqala lamathemba kunye nezikhokelo. Kuzo zonke iimeko, ndincede umxhasi ukuba anyuse umgangatho okwangoku kwiphepha kunye nomxholo onxulumene noko ngeendlela ezininzi:
Ukudibanisa -Ngenxa yeendlela zabo zokuvelisa umxholo, abathengi bahlala benamaphepha amanqanaba asezantsi angawona manqaku afanayo. Ukuba babenemibuzo ephambili eyi-12; umzekelo, malunga nesihloko… babhala iiposti zebhlog ezili-12. Abanye babala kulungile, uninzi aluzange. Ndiza kulilungisa eli phepha kwaye ndililungelelanise nayo yonke imibuzo ephambili kwinqaku elinye elilungiswe kakuhle, ndibhekisa onke amaphepha kwelona libeke ezona zibalaseleyo, ndisuse ezindala, kwaye ndibukele iphepha linyuka ngenqanaba. Ayisiyonto ndiyenzileyo kwaba kanye… ndiyenza ngalo lonke ixesha kubaxumi. Ndiyenzile apha apha Martech Zone, Nathi!
Ulwakhiwo -Ndilungisile ii-slugs zamaphepha, izihloko, amagama aphambili anesibindi, kunye neethegi ezigxininisayo ngalo lonke ixesha ukulungiselela amaphepha ngamava omsebenzisi aphezulu. Abacebisi abaninzi be-SEO banokungxala ngokuhambisa kwakhona iphepha elidala lokwenza into entsha, besithi iya kuba njalo liphulukana negunya elithile xa ilungisiwe. Kwakhona, ndiyenzile le ndawo yam indawo ndiphindaphinda xa isenza ingqiqo kwaye iyasebenza ngalo lonke ixesha ndiyenze ngengqondo.
umxholo -Ndiziguqule ngokutsha iintloko kunye nomxholo ukubonelela ngeenkcazo ezinyanzelekileyo, ezihlaziyiweyo ezichaphazela ngakumbi iindwendwe. Kunqabile ukuba ndiciphise ukubalwa kwamagama kwiphepha. Rhoqo, ndisebenza ekwandiseni ukubalwa kwamagama, ukongeza amacandelo ongezelelweyo, ukongeza imizobo, kunye nokudibanisa ividiyo kumxholo. Ndivavanya kwaye ndisebenzisa inkcazo yemeta yamaphepha onke amaxesha ukuzama ukuqhuba ngokungcono ngokucofa amaxabiso ukusuka kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ndibhale malunga nendlela yokwenza chonga amathuba e-SEO ukuphucula umgangatho wokukhangela kwaye ndachaza ukuba ndiyifumene ilayibrari yomxholo njengethuba elihle lokuqhuba indawo eyongezelelweyo. Ndabekwa kwindawo ye-9 kwinqaku lam.
Ndiligqibile eli nqaku, ndihlaziya isihloko senqaku, isihloko se-meta, inkcazo yemeta, ukuphucula inqaku ngengcebiso kunye nezobalo ezihlaziyiweyo. Ndenze uphononongo lwawo onke amaphepha okhuphiswano lwam ukuqinisekisa ukuba iphepha lam lalicwangciswe ngcono, lihlaziyiwe, kwaye libhalwe kakuhle.
Isiphumo? Ndisuse inqaku ku inqanaba 9th ukuya kwinqanaba le-3!
Impembelelo yoku yayikukuba mna iphindwe kabini ukujonga iphepha Ngaphezulu kwexesha elidlulileyo le-organic traffic:
Kwiminyaka eyadlulayo, oko bekunjalo kunokwenzeka kwi-algorithms yomdlalo kwaye ungalutshabalalisa uluhlu lwakho ngokwenza utshintsho kumxholo wakho obekekileyo kuba ii-algorithms bezixhomekeke kakhulu kwiimpawu zekhasi kunokuziphatha komsebenzisi.
UGoogle uyaqhubeka nokulawula ukukhangela kuba bazifaka ngocoselelo. Ndihlala ndixelela abantu ukuba amaphepha aya kubhalwa kwisalathiso somxholo, kodwa abekwe ngokusekwe kukuthandwa kwawo. Xa uzenza zombini, ulonyusa inqanaba lakho.
Ukuvumela uyilo, ulwakhiwo, okanye umxholo ngokwawo umile yindlela eqinisekileyo yomlilo yokuphulukana nenqanaba lakho njengoko iisayithi ezikhuphisanayo zikhulisa amava omsebenzisi angcono kunye nomxholo obandakanyekayo. Iialgorithms ziya kuhlala zihamba ziye kwicala labasebenzisi bakho kunye nokuthandwa kwephepha lakho.
Oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uqhubeke nokusebenza kumxholo kunye nokwenza into uyilo! Njengomntu oqeshiweyo ukunceda abathengi ngeinjini yokukhangela ngalo lonke ixesha, ndihlala ndijolise kumgangatho womxholo kunye namava omsebenzisi ngaphezulu kwealgorithms.
Ewe ndifuna ukuhambisa ikhaphethi ebomvu kwiinjini zokukhangela ezinendawo kunye nephepha le-SEO ... kodwa ndiza kutyala imali kuyo ukuphucula amava omsebenzisi ngalo lonke ixesha kunye nokushiya amaphepha angatshintshanga ngenxa yoloyiko okanye ukulahleka kwinqanaba.
Ngaba kufuneka uliHlaziye iphepha eliPhezulu kakhulu kwiZiphumo zeNjini yokuKhangela?
Ukuba ungumcebisi we-SEO ocebisa abathengi bakho ukuba bangaze bahlaziye umxholo wabo obekwa kakhulu… Ndiyakholelwa ukuba awukhathali kwimisebenzi yakho ukubanceda baqhube iziphumo zeshishini eziphuculweyo. Yonke inkampani kufuneka igcine umxholo wephepha labo usexesheni, efanelekileyo, enyanzelisayo, kunye nokubonelela ngamava omsebenzisi aphuculweyo.
Umxholo omkhulu odityaniswe namava aphezulu omsebenzisi awunokukunceda nje isikhundla esingcono, iya kuthi ngokunjalo qhuba ukuguqulwa okungaphezulu. Le yeyona njongo iphambili yokuthengisa umxholo kunye nezicwangciso ze-SEO… ungazami ukulungelelanisa ii-algorithms.
tags: ulungiselelo lomxholoyokwandisa umxholoumxholo okhoyoenjini yokukhangela nounSEOIntsomi yokoukuhlaziya umxholo